မြင့်မားသောထိရောက်မှုအကောင်းဆုံးဖုန်မှုန့်စုဆောင်းကိုမြင်တော်မူ၏ China Manufacturer
လိုင်း Pulse အိတ် filter ကိုပိတ်ပါ,မြင့်မားသောဖိအား Pulse အိတ် Filter,အဖြူရောင် Ash မီးဖိုအိတ်စစ်စက်
Botou Youjian Environmental Protection Equipment Co. LTD. [Hebei,China] လုပ်ငန်းအမျိုးအစား: Manufacturer အဓိကစျေးကွက်များ: Africa , Americas , Asia , Caribbean , East Europe , Europe , Middle East , North Europe , Oceania , Other Markets , West Europe , Worldwide ထုတ်ကုန်: 11% - 20% Cert: FAMI-QS, GB, ISO9001, ISO9002 ဖေါ်ပြချက်: လိုင်း Pulse အိတ် filter ကိုပိတ်ပါ,မြင့်မားသောဖိအား Pulse အိတ် Filter,အဖြူရောင် Ash မီးဖိုအိတ်စစ်စက်
Home > ထုတ်ကုန်များ > အိတ် Filter ကို > မြင့်မားသောထိရောက်မှုအကောင်းဆုံးဖုန်မှုန့်စုဆောင်းကိုမြင်တော်မူ၏
ပြာများပေါ်ပေါက်သည့်နေရာအားလုံးတွင်ဖုန်မှုန့်အဖုံးများတပ်ဆင်ထားပြီးဖုန်မှုန့်ဓာတ်ငွေ့ကိုပိုက်လိုင်းသဘာဝဓာတ်ငွေ့လမ်းကြောင်းမှဖုန်မှုန့်ဖယ်ရှားရေးကိရိယာသို့သယ်ဆောင်သည်။ ဓာတ်ငွေ့အစိုင်အခဲကိုခွဲထုတ်လိုက်ပြီးနောက်ဖုန်မှုန့်များကိုဖယ်ရှားသည့်ကိရိယာတွင်စုဆောင်းပြီးသန့်ရှင်းသောဓာတ်ငွေ့ကိုအထွေထွေပိုက်ထဲသို့သို့မဟုတ်လေထုထဲသို့တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှတ်သည့်ကိရိယာများ၊ ဆိုလိုသည်မှာဖုန်ဖယ်ရှားသည့်စနစ်နှင့် ဖုန်မှုန့်စုဆောင်းစနစ်၌တည်ရှိ၏။ အုပ်စု၏အရေးကြီးအစိတ်အပိုင်း။ လေဝင်လေထွက်နှင့်ဖုန်မှုန့်ဖယ်ရှားခြင်း၏ထောင့်မှဖုန်မှုန့်သည်လေထုထဲတွင်အချိန်ကြာမြင့်စွာတွေ့နိုင်သောသေးငယ်သောအမှုန်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် aerosol ဟုခေါ်သောပျံ့နှံ့မှုစနစ်ဖြစ်ပြီးလေတွင်ပျံ့နှံ့သောအလွှာရှိပြီးအစိုင်အခဲအမှုန်များသည်အဆင့်များကွဲသွားသည်။ ဖုန်မှုန့်ဖမ်းစက်တစ်ခုသည်ဤအစိုင်အခဲအမှုန်ကိုလေခွင်းနှင့်ခွဲခြားသောကိရိယာဖြစ်သည်။
လုပ်ဆောင်ချက်နိယာမအရ duster ကိုအောက်ပါသို့ခွဲနိုင်သည်။
၁။ ခြောက်သွေ့သောစက်မှုစက်မှုဖုန်မှုန့်ဖယ်ရှားရေးသည်အဓိကအားဖြင့်ဖုန်မှုန့်ဖယ်ရှားရေးကိရိယာများဖြစ်သော settling chamber, inert ဖုန်မှုန့်စုဆောင်းသူ၊ ဆိုင်ကလုန်းဖုန်မှုန့်စုဆောင်းသူများနှင့်စသည်။ ၎င်းကိုမြင့်မားသောအာရုံစူးစိုက်မှုကြမ်းမှုန့်အရွယ်အစားဖုန်မှုန့်များ၏ခွဲခြားခြင်းသို့မဟုတ်စုစည်းခြင်းအတွက်အသုံးပြုသည်။
၂။ စိုစွတ်သောဖုန်မှုန့်ဖယ်ရှားရေးသည်ရေစွမ်းအင်အပေါ်တွင်မှီခိုရသည်။ ရေမှုန်ရေမွှားတာဝါတိုင်၊ ပွတ်တိုက်စက်၊ သက်ရောက်မှုရှိသည့်ဖုန်မှုန့်စုဆောင်းသူများနှင့် Venturi ပြွန်စသည်တို့ကဲ့သို့သောဖုန်မှုန့်များကိုခွဲခြားရန်နှင့်ဖမ်းယူရန်စသည်။ ပိုပြီးအသုံးပြုခဲ့သည်။ ပိုထူသော hydrophilic ဖုန်မှုန့်များ၏ထိရောက်မှုသည်ခြောက်သွေ့သောစက်မှုဖုန်မှုန့်စုဆောင်းသူများထက်ပိုမိုမြင့်မားသည်။
3, granular အိပ်ရာဖုန်မှုန့် remover ဓာတ်ငွေ့ဖြေရှင်းချက်တွင်ပါရှိသောဖုန်မှုန့် filtering များအတွက်ပစ္စည်းကိရိယာများကိုပိတ်ဆို့ရန် filter ကိုပစ္စည်းအဖြစ်ကွဲပြားခြားနားသောအမှုန်အရွယ်အစားပစ္စည်းစုဆောင်းခြင်းအလွှာကိုအသုံးပြုသည်။ ၎င်းကိုအဓိကအားဖြင့်ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းများ၊ သတ္တုနှင့်ထုတ်လုပ်သည့်လုပ်ငန်းများတွင်ဖုန်မှုန့်များထုတ်လွှတ်သည့်နေရာများတွင်အသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည်များသောအားဖြင့်မြင့်မားသောအာရုံစူးစိုက်မှု၊ ကြမ်းတမ်းသောအမှုန်များနှင့်အပူချိန်မြင့်မားသောဖုန်မှုန့်များကိုမကြာခဏစစ်ထုတ်သည်။
4. အိတ်စစ်ထုတ်စက်သည်ဖိုင်ဘာထည်သို့မဟုတ်ဖြည့်သည့်အလွှာကိုစစ်ထုတ်သည့်အရာအဖြစ်အသုံးပြုသောအမှိုက်ပုံတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အသုံးပြုမှု၊ ပုံစံ၊ ဖုန်မှုန့်အရွယ်အစားနှင့်ထိရောက်မှုများစွာရှိသည်။ ၎င်းကိုအမှုန့်ကောင်းများစုဆောင်းရာနေရာ၊ ဥပမာဖုန်မှုန့်စုဆောင်းခြင်းစနစ်နှင့်လေဝင်ပေါက်စနစ်တွင်အသုံးပြုသည်။ မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းစစ်ထုတ်စက်အမျိုးအစားအသစ်များစဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာခြင်းကြောင့်ဖိုင်ဘာစစ်ထုတ်သည့်နည်းပညာတိုးတက်မှုသည်အရှိန်မြှင့်လာခြင်း၊ ထုတ်ကုန်အသစ်များဆက်လက်ထွက်ပေါ်လာခြင်းနှင့်လုပ်ငန်းနယ်ပယ်ကျယ်ပြန့်လာခြင်းတို့ဖြစ်သည်။
5. Electrostatic မိုးရွာသွန်းမှုသည် electrostatic field ထဲသို့ဖုန်မှုန့်လေထုကိုမိတ်ဆက်ပေးသောဖုန်မှုန့်စုဆောင်းသူဖြစ်သည်။ high voltage electric field ၏လုပ်ဆောင်မှုအောက်တွင်ဓာတ်ငွေ့သည် ionized ဖြစ်ကာအီလက်ထရွန်များနှင့်အပေါင်းဓါတ်များရှိသည်။ သူတို့ကအသီးသီးအပြုသဘောနှင့်အပျက်သဘောဝင်ရိုးစွန်းသို့ရွှေ့။ အလုပ်လုပ်သောလျှပ်စစ်နယ်ပယ်မှဖုန်မှုန့်အမှုန်များစီးဆင်းသောအခါ၎င်းတို့သည်အနုတ်လက္ခဏာဆောင်သောဆန့်ကျင်ဘက်အားအရှိန်တစ်ခုဖြင့်အားသွင်းသည်။ ပြားများကိုထိုနေရာတွင်ဖယ်ရှားပြီးလေစီးကြောင်းမှဖယ်ထုတ်ပြီး electrostatic မိုးရွာသွန်းမှုတွင်စုဆောင်းသည်။ ဖုန်မှုန့်စုဆောင်းသူများသည်မြင့်မားသောဖုန်မှုန့်ဖယ်ရှားခြင်းစွမ်းရည်၊ ၎င်းသည်ကောင်းသောအမှုန့်အမှုန်များကိုစုဆောင်းရာတွင်အိတ်စစ်ထုတ်သည့်အရာနှင့်အတူတူပင်ဖြစ်သည်။
ဆက်စပ်ထုတ်ကုန်များစာရင်း: လိုင်း Pulse အိတ် filter ကိုပိတ်ပါ , မြင့်မားသောဖိအား Pulse အိတ် Filter , အဖြူရောင် Ash မီးဖိုအိတ်စစ်စက် , ရေခန်းခြောက် Filter ကိုနှိပ်ပါ , ပူပြင်းတဲ့ Filter ကိုနှိပ်ပါ , အလိုအလျှောက်ခါးပတ် filter ကိုနှိပ်ပါ , မြှေး filter ကိုနှိပ်ပါ , SSPF စီးရီး filter ကိုနှိပ်ပါ